Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6 nnyocha ndị e mere jikọrọ ọzọ data
-Ejikọ nnyocha ndị e mere ka ndị ọzọ data isi mmalite na-enyere gị na-emepụta kwuru na ọ ga-ekwe omume na uzọ ọzọ.
Kasị nnyocha ndị e mere na-eguzo-naanị ya, onwe ẹdude mgbalị. Ha adịghị amụta na ọ bụla ọzọ na ha adịghị-uru nke ndị ọzọ na-data na dị n'ụwa. Nke a ga-agbanwe. E nwere nnọọ ukwuu na-enweta ya site na-ejikọ nnyocha e mere data ka ndị ọzọ na data isi mmalite, dị ka digital Chọpụta data anyị tụlere n'Isi nke 2. Ikike a ejikọta nnyocha ndị e mere ka ndị ọzọ data negosi na-arịọ na-edebe ihe ndị complements na ọ bụghị ndị nọ n'ọnọdụ.
Karịsịa, Aga m ịmata ọdịiche dị n'etiti abụọ dị iche iche na-ejikọ ajụ ma na-edebe: adịkwu ajụ na enriched na-arịọ (ọgụgụ 3.10). Na Amplified ajụ, dijitalụ metụtara ndị na-anọghị ọ bụla kpọmkwem mmasị ndị ọzọ karịa ha nwere ikike inye aka wepụ ihe bara uru site nnyocha e mere data. Na enriched ajụ, n'aka nke ọzọ, dijitalụ Chọpụta n'ezie nwere a isi ọtụtụ nke mmasị na nnyocha e mere data na-ewuli ndị dị mkpa onodu gburugburu ya.
Chepụta 3,10: n'ụzọ abụọ bụ isi ikpokọta digital metụtara na nnyocha e mere data. Na adịkwu ajụ (Nkebi 3.6.1) na dijitalụ metụtara na-eji akọwaghị ihe nnyocha e mere data. Na enriched ajụ (Nkebi 3.6.2) na dijitalụ metụtara n'ezie nwere a isi ọtụtụ nke mmasị na nnyocha e mere data na-ewuli ndị dị mkpa onodu gburugburu ya.